डिएसपीको यस्तो हर्कत !
HomeAparadh Khabarडिएसपीको यस्तो हर्कत !
aparadhkhabar.com 4:42 PM
बिहे गर्ने प्रलोभनमा पारेर ती युवतीसँग ‘लिभिङ टुगेदर’ बस्दै आएका डीएसपी खत्रीले अहिले एक सभासद्सँग सम्बन्ध बढाएपछि ती युवतीको सम्बन्ध टुट्न पुगेको हो । डीएसपीको नियतमा शंका लागेपछि ती युवतीले आफुलाई तत्काल बिहे गर्न प्रस्ताव राखेकी थिइन् ।
तर, डीएसपी खत्रीले युवतीको प्रस्ताव अस्वीकार गर्दै बिहे गर्न नसक्ने बरु ४÷५ लाख दिएर रखैल बनाएर राख्ने बताएपछि बिरक्तिएकि युवती न्याय खोज्दै गत साता महानगरीय प्रहरी परिसर पुगेकी थिइन् । समाजसेवामा सक्रिय रहेकी ति युवती कुनै बेला पत्रकारितासमेत गर्थीन् ।
विवाहित रहेका डीएसपी खत्रीको यस्तो हर्कत देखेपछि परिसर प्रमुख एसएसपी छबिलाल जोशीले तत्काल परिसरका एसपी प्रद्युम्न कार्कीलाई यसबारेमा बुझ्न आदेश दिएका थिए । डीएसपी खत्रीलाई परिसरमा झिकाएर छलफल गरेतापनि ति पिडीत बनेकी युवतीलाई न्याय भने नपाएको परिसर स्रोत बताउँछ ।